Ikike Imezi Ihe: Ndị na-ere ahịa na ndị ọrụ ugbo na-achọ nha nha - Potatoes News
Ndị ọrụ ugbo na-adabere na data na ngwanrọ. Nke a nwere nsogbu ya, dị ka mkparịta ụka gbasara ikike ịrụzi. Ndi oru ugbo nwere ikike idozi akụrụngwa mgbe ọdachi dara, ma ọ bụ site n'aka nke onwe ha ma ọ bụ ndị na-akwadoghị nke ụlọ ọrụ mbụ ahụ? Ọrụ Ugbo n'ọdịnihu lere anya otú ndị na-ere ahịa na ndị ọrụ ugbo si achọ nhazi iwu na United States, Canada, Europe na Australia.
The "Ikike Mmezi" ije na-ewe a patchwork anya na North America, dị iche iche na-etoju nke ọchịchị n'ime Canada na United States na-achọ na-aga n'ihu nke aghọta nsogbu chere ọtụtụ ụlọ ọrụ na tech-eri ọha ọzọ n'ozuzu.
N'ikwu okwu sara mbara, yana n'okwu ọchịchị ndị ọzọ, ikike idozi nsogbu na Canada na United States na-esite na nchekasị ndị elektrọniks ndị ahịa na-eri. Kpọsị, ikike nke ndị zụrụ otu teknụzụ dị ka ekwentị ama ma ọ bụ ngwaọrụ medial iji mezie ihe ahụ ndị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-abụghị ndị mepụtara ya.
Na ngalaba ọrụ ugbo na ụlọ ọrụ ndị ọzọ - gụnyere ile ọbịa na nrụpụta ọrụ, ndị ọzọ nwere ọnụ okwu - nsogbu a gbanwere ma ndị na-azụ ahịa nwere ikike idozi akụrụngwa mgbe ọdịda dara, ma ọ bụ n'onwe ha ma ọ bụ ndị na-akwadoghị nke onye nrụpụta mbụ ahụ.
Ihe abuo abuana - enwere ike idozi akụrụngwa ka ọ ghara imebi ikike ma ka na-ekwe ka onye ọrụ ahụ gaa n'ihu na-arụ ọrụ, nhazi ahụ ọ ga-eme ka onye ọrụ ahụ nwee iwu ma ọ bụrụ na ihe mberede emee?
Gbanwee ngwaọrụ elektrọnik
Ajuju nke ikpeazu dikwa mkpa karie ebe obu na ikike imezi mkparita uka gunyere otutu ihe ndi oru ugbo na ndi otu choro maka ikike igbanwe ngwa elektrọnik (dika ndi Repair Association di na United States, nke n’egosi ikike mmezi zuru oke na nke edoghi anya maka ngwa ndi azuru). Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ nyiwe dijitalụ ma ọ bụ ihe eji arụ ọrụ nwere ike ịgbalite site na mgbanwe mmemme anaghị anabata ndị nrụpụta ngwa.
Ikike idozi ajụjụ abụghị ihe ọhụrụ. Dịka ọmụmaatụ, na Canada, esemokwu a ugboro ugboro n'ụlọ omebe iwu na site na kọmitii ndị omebe iwu dị iche iche n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ọtụtụ mba Amerịka na-arụrịta ụka banyere ya ruo ọtụtụ afọ. Groupstù ndị na-azụ ahịa na ihe a na-akpọ mgbe ụfọdụ dị ka "ụlọ ọrụ mmezi" etinyela aka na mkparịta ụka ahụ, nke malitere nke ọma ihe karịrị afọ isii gara aga.
iPhones na ngwaahịa Apple ndị ọzọ bụ otu n'ime ihe atụ kachasị ama ama nke ihe dị, dị ka arụmụka site na ikike idozi ndị na-akwado ya, ụdị ọnụọgụ ndị ahịa ebe a manyere onye zụrụ ya gaa Apple maka nrụzi ọ bụla ma ọ bụ nsogbu arụmọrụ, ma ọ bụ dabere na ụlọ ọrụ ahụ maka dochie anya ya. Ndị ụlọ ọrụ a na-achịkwa nke a n'ụzọ dị iche iche, gụnyere iji ngwa ọrụ disassembly pụrụ iche.
Dịka ọmụmaatụ, John Deere bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-akatọkarị akụrụngwa maka ihe enwere ike ịhụ dị ka atumatu mmezi - atumatu nke ụfọdụ ndị America na-akwado idozi mmezi na-ekwu na-emebi ikike ịzụta nke enyere n'okpuru iwu nwebisiinka nke gọọmentị etiti.
Ọtụtụ ndị na-ahụta nnukwu ego dị otu a dị ka ihe dị oke ọnụ, na-eri oge, ma na-eri oge maka onye zụrụ ya. Ha aburula ndi amara dika ihe eji eme ihe eji eme ihe kwa ubochi di nso karia nke ndi mmadu, na ubi.
Ije ozi na traktị John Deere na ụlọ ọrụ Dutch. N'akụkụ ụfọdụ nke ụwa, dị ka Australia, ọ na-esikarị ike ịnweta akụkụ ahụ maka ngwa igwe.
Ihe mgbagwoju anya na nsogbu
Agbanyeghị na iji iwe ma ọ bụ opekata mpe were iwe, na-ekwe ndị zụtara ikike ịme mgbanwe ọ bụla ha chọrọ site n'aka onye ọ bụla ha chọrọ, na-ewepụta ajụjụ ndị na-agbagwoju anya.
Ndị na-emegide imeghe mmezi nke ikike mmezi kwughachiri ihe egwu na ikike iji ngwá ọrụ eme ihe n'ụzọ dị otú ahụ nwere ike ime.
Na ndị nrụpụta na ndị na-ere ahịa, atụmanya nke igwe ndozi nke dị n'okpuru akwụkwọ ikike mana agbanweela ya na ụzọ ndị a na-akwadoghị (dịka ịtugharị traktọ iji rụọ ọrụ nke ọma karị na ngwa ngwa karịa ka ndị nrụpụta ahụ kwadoro) siri ike afọ. Ọzọkwa, ndị na-emegide ikike mmezi zuru ebe niile na-ekwu na imirikiti ndozi ka bụ ihe eji arụ ọrụ, ndị ọrụ nwere ike idozi ya kpamkpam.
Nchegbu banyere ire akụrụngwa eji arụ ọrụ nke agbanweela na mgbakwunye ndị nrụpụta na-echekwa, n ’ọ bụrụ na onye zụrụ ahịa amaghịzi ihe ịgbatị nchekwa ma ọ bụ ogologo ndụ igwe nwere ike belata. Companieslọ ọrụ ndị dị ka Apple ebuliela ihe ndị nwere ọgụgụ isi.
Dika akụrụngwa akụrụngwa na-arịwanye digitized, agbanyeghị, ihe elektrọnik dị ka ihe enweghị isi ka a kọọrọ na-akpata nkwụsịtụ na mmepụta. Ikike ịrụzi ndị ọmịiko si otú a na-arụ ụka maka itule n'etiti ikike na nsogbu akwụkwọ ikike, yana ikike ịme ka ihe na-agagharị ọzọ mgbe oge dị mkpa - ọbụlagodi na azịza nke ikpeazụ ahụ pụtara ịgbanyụ ngwa ọrụ dijitalụ ahụ na-akpasu iwe, na ịkwọ ụgbọala.
N'elu ya niile bụ nchegbu gbasara ụlọ ọrụ mmezi ndị e kwuru na mbụ. Kpọmkwem, gịnị ga - eme ma ọ bụrụ na mgbochi nrụzi emesịa mezuo ebe ọ na - enweghị onye ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ike ịrụzi ngwa ọrụ na-enweghị ịbụ akụkụ nke ma ọ bụ kwenye ya site n'aka onye nrụpụta mbụ ahụ?
Ọnọdụ dị otú a ga-abụ, dị ka a na-ekwukarị, ọ ga-adịcha njọ maka azụmaahịa ndị nweere onwe ha a na-apụghị ịgụta ọnụ nke ngalaba niile.
Iwu ndị Canada na ndị America ugbu a
Ikike mmezi nwere njikọ na iwu nwebisiinka gọọmenti etiti na Canada na United States. Ya mere, a chọrọ mgbanwe na ọkwa gọọmentị iji gosipụta ikike nke ụmụ amaala onwe ha iji nweta ọrụ ndozi onwe ha, ma ọ bụ dozie onwe ha.
Onye otu nnochite anya Brian May webatara ndị otu ụlọ ọrụ iwu na House of Commons n'isi mbido 2021 iji mezie iwu Canada ugbu a na nke a. N’ọnwa Juun gara aga, onye Republican Republican Joe Morelle webatara ụdị ụgwọ a na Houselọ Ndị Nnọchiteanya nke United States Na mba abụọ ahụ, otu mpaghara na steeti dị iche iche na-ekerekwa oke.
Ikike ịrụzi iwu
Na America, ọtụtụ steeti etinyelarị ụdị ụfọdụ nke ikike imezi iwu. Ngbali iwebata iwu yiri nke a na Ontario kụrụ afọ n'ala n'okpuru gọọmentị mpaghara mbụ. Ọ bụrụ na ụgwọ gọọmentị etiti gafere, agbanyeghị, mpaghara Canada ọ bụla ga-ekpebi etu a ga-esi sụgharịa ma kwado ya.
N'ikwu okwu n'ụzọ sara mbara, ikike idozi iwu bụ ihe anwale iji nweta mbido digitization na-abawanye ụba nke akụkụ niile nke ndụ, ma nke ọha ma nke onwe, si otú a na-ezere ihe ọtụtụ ndị na-ewere dị ka ọdịnihu dystopian ebe ụmụ amaala enweghị ike ịgbanwe taya nke oyi ha. , mepee njedebe nke ama, ma ọ bụ na-aga n'ihu ịgha mkpụrụ mgbe akụ na-aga na fritz.
Software ọkachamara na-aghọ esiwanye mkpa na traktọ na ígwè noo. Enweghi ike ịnweta data nke ndị na-emepụta dị ezigbo mkpa maka ha.
Olileanya maka ezi ngwọta
Otu dị iche iche nke ugbo na-eche ka otu mgbanwe iwu gọọmentị etiti ga-adị, yana otu steeti na mpaghara ga-esi mezuo ya. Ọtụtụ na-atụ anya na ọnụnọ nke iwu ndị dị ugbu a ga-enyere aka n'ịmepụta atumatu ezi uche dị na ya, nke ga-abara onwe ha uru na ọkwa ọ bụla. N'ezie, arụmụka maka ụkpụrụ ziri ezi, nke nwere ọgụgụ isi yiri ka ọ na-eto eto n'akụkụ abụọ nke ikike iji dozie mkparịta ụka n'etiti mpaghara ọrụ ugbo North America.
N'ezie, ọnọdụ ndị dị oke njọ na nsọtụ abụọ nke ụdịdị dị iche iche ka dị, n'ezie. Otu a ga-ahụ etu iwu gọọmentị etiti ga-esi mee ka a dị n'otu.
Farmerstù Na-ahụ Maka Ọrụ Ugbo na Australia na-ekwu na ndị na-emepụta igwe ọrụ ugbo na-ajụ ịnye onye ọ bụla na-abụghị netwọkụ ha nyere ikike ịnye ozi teknụzụ, ngwaọrụ nyocha na akụkụ ahụ. N'ime ogologo akụkọ gbara akwụkwọ banyere ọrụ na-arụpụta ihe nke Australia na 'ikike ịrụzi', ndị na-ajụ ajụjụ na-ewelite nchegbu na ndị na-emepụta ngwaahịa na-eji ọkwá ha kachasị elu na ahịa mmezi iji gbochie ndị nrụzi nọọrọ onwe ha ịnweta akụkụ ndị dị mkpa, ozi na akụrụngwa chọrọ iji rụkwaa ngwaahịa .
Tags: igwe oru ugbondị na-eto etoJohn Deerendozi
Kọmitii Ọchịchị Mba Na-ahọpụta Onye Nchịkọta Ihe Nlekọta
Fatịlaịza spinner spreaders maka ahihia kụrụ: myths
Haulm egbu na nduku na 2021: Gini bu nhọrọ?
3 N’IME IHE UFỌR US ANY US US
Ebee ka ihe nkiri Art & Mary nọ? Ruptlọ ikpe enweghị ego